My Little Poem Factory: လေခိုနေတဲ့ ညနေ
My Little Poem Factory
Myanmar Poems of Some Poets from Yinmarbin
« Home | ဆေးရုံ » | နွေ » | အိပ်တန်းပြန် » | ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ က အရေးတကြီး ခေါင်းလောင်းသံ » | မိသားစု » | အရောင်ပျယ်နေတဲ့ နေ့ » | သားကောင် » | ဟာမိုနီ » | ရွက်ကြွေပုံပြင် » | ဒိုင်ယာရီ အ၀ါ » လေခိုနေတဲ့ ညနေ
(၁)နေက အတော်လေး စောင်းသွားပြီ...။ (၂)ညနေခင်းရထားနဲ့ ဆိုက်ရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါင်မုန့်အသစ်တွေနဲ့ ၀ိုင်ချိုအိုးတွေ...စားခွင့်မရရင်တောင် ချိုအီနေနိုင်တဲ့အခိုင်လိုက် စပျစ်သီးတွေ....တစ်ဖွဲ့ကြီး ဆိုက်ရောက်လာလိမ့်မယ်..။ (၃)ရထားကြိုဖို့ ထွက်လာလေကလေးချွန်တဲ့ပြီးစိတ်လက်ကြည်သာပန်းတွေဆယ်နှစ်ရာသီစာ တပြိုင်တည်းပွင့်စမ်းချောင်းလေးထဲလှိုင်းသားပေါက်လေးတွေ ခုန်ထဘူတာ နီးလာပြီ....!!!!ရထားအကြိတ်ခံရတဲ့ သံလမ်းလိုရင်အုံလေး တုန်ခါပြဘူတာနီးလာ......ရင်အုန်တုန်ခါပိုနီးလာ........အရမ်းတုန်ခါ (၄)၀င်လာဘီရထား ကိုယ့်ဆီ ၀င်လာဘီမဟုတ်သေးဘူးကိုယ်က ညနေခင်းထဲ ၀င်သွားတာဟိုမှာ..!! ရနံ့တွေ မဟုတ်လားပေါင်မုန့်သစ်ရနံ့စေးပျစ်ထုံအီ ၀ိုင်ခ်ျိုရနံ့ တလူလူဦးထုပ်ဖြူလေး ထက်အောက်လှုပ်ပြနေတာကရောဟုတ်လား..!! ဒါသိပ်ကို ရည်ငံနေပါလားကိုယ့်အတွက် “တိုးတိုးဖော်” တဲ့လားထခုန်စမ်း!!!!!!!၀မ်းသာဟောက်ပက် ထခုန်ပစ်စမ်းဒီလိုတော့လည်း စိတ်ကောင်းရှိလှချေလားရထားက ကိုယ့်ဆီ အပြေးကလေး..သခင်ကြိုခွေးလေးတစ်ကောင်လိုကိုယ်က အမောတကော ပြေးလွှား..ရထားက မီးခိုးအူလို့ လေထဲမှာ ... ... ..ကိုယ်က မီးခိုးအူလို့ လေထဲမှာ ... ... .. (၅)ဒီကနေ့ထုတ် သတင်းစာကဒီလို ဖော်ပြထားတယ်“................နပိုလီယန်အတွက်ဘရပ်ဆဲလ် ကပွဲတွေမှာ ဘရိတ်ပေါက်ခဲ့တယ်၊လူအိုရုံဘူတာလေးမှာ......မနေ့က ရထား ဘရိတ်ပေါက်ခဲ့တာလည်းသိပ်ကို ကျိန်းသေတယ်.....” (၆)နေက အတော်လေး စောင်းသွားပြီ.....။ - မျိုးသက်နှစ် -Labels: love
Posted by Ðaywalker[Soul] on Wednesday, August 27, 2008
at 11:51 PM | Permalink ဒီကနေ့ထုတ် သတင်းစာကဒီလို ဖော်ပြထားတယ်“................နပိုလီယန်အတွက်ဘရပ်ဆဲလ် ကပွဲတွေမှာ ဘရိတ်ပေါက်ခဲ့တယ်၊လူအိုရုံဘူတာလေးမှာ......မနေ့က ရထား ဘရိတ်ပေါက်ခဲ့တာလည်းသိပ်ကို ကျိန်းသေတယ်.....”ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာပါလား
Posted by မသက်ဇင် |
May 14, 2009 at 1:43 PM ကဗျာကောင်းတယ်ကြိုက်တယ်
Posted by ကဗျာဦး |
May 25, 2009 at 6:17 AM ၅)ဒီကနေ့ထုတ် သတင်းစာကဒီလို ဖော်ပြထားတယ်“................နပိုလီယန်အတွက်ဘရပ်ဆဲလ် ကပွဲတွေမှာ ဘရိတ်ပေါက်ခဲ့တယ်၊လူအိုရုံဘူတာလေးမှာ......မနေ့က ရထား ဘရိတ်ပေါက်ခဲ့တာလည်းသိပ်ကို ကျိန်းသေတယ်.....”(၆)နေက အတော်လေး စောင်းသွားပြီ.....။တွေးရင်းခံစားဖတ်ပါတယ်
Posted by မေမေခင် |
November 2, 2009 at 11:55 AM "လေခိုနေတဲ့ ညနေ"ကိုခံစားသွားတယ်
Posted by Nan |
November 5, 2009 at 1:44 PM ကဗျာလေးကောင်းလို့ထပ်ဖတ်သွားတယ်
Posted by မနန်း |
December 7, 2009 at 5:20 AM PostaComment
ဆေးရုံနွေအိပ်တန်းပြန်ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ က အရေးတကြီး ခေါင်းလောင်းသံမိသားစုအရောင်ပျယ်နေတဲ့ နေ့သားကောင်ဟာမိုနီရွက်ကြွေပုံပြင်ဒိုင်ယာရီ အ၀ါ
Feeds & Traffic
MyLittlePoemFactory by Daywalker is licensed under a
Commons Attribution 3.0 United States License.Based onawork at daywalker-poem.blogspot.com.Permissions beyond the scope of this license may be available at